Politika momba ny tsiambaratelo - AfricaArXiv
Ny adiresin'ny tranokalanay dia: https://info.africarxiv.org.
Ny tady tsy mitonona anarana noforonina avy amin'ny adiresy imailakao (antsoina koa hoe tenifototra) dia mety omena ny serivisy Gravatar hahitana raha mampiasa izany ianao. Azo jerena eto ny Politika momba ny serivisy momba ny serivisy Gravatar: https://automattic.com/privacy/. Aorian'ny fankatoavana ny fanehoan-kevitrao, ny sarin'ny mombamomba anao dia hita ho hitan'ny daholobe amin'ny tontolon'ny hevitrao.
Raha mametraka fanehoan-kevitra ao amin'ny tranokalanay ianao dia afaka misafidy ny hitahiry ny anaranao, adiresy imailaka sy tranonkala amin'ny cookies. Natao ho an'ny fahafaham-po anao izany ka tsy mila mameno ny antsipirihanao intsony rehefa mametraka fanehoan-kevitra hafa. Ireo mofomamy ireo dia haharitra herintaona.
Raha mametraka fanehoan-kevitra ianao dia tazonina mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fanehoan-kevitra sy ny metadata. Izany dia mba hahafahantsika manaiky sy mankasitraka ireo tsikera manaraka aingana fa tsy mitazona azy ireo amin'ny filaharana antonony.